I-Loft enkabeni yedolobha lase-Eindhoven - I-Airbnb
I-Loft enkabeni yedolobha lase-Eindhoven
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Anke
I-'t heiligstokske iyindawo ezimele ezimele ethokomele enkabeni yedolobha lase-Eindhoven. Iba nokuhlala okumangalisayo enkabeni yedolobha ngaphandle komsindo ovela edolobheni, kodwa ngobumnandi bempilo yedolobha.
Isitezi esizimele esisenkabeni yedolobha. Chitha ubusuku bakho emibhedeni enezithombe ezine, yehlisa umoya ezihlalweni ezikhululekile futhi uphuze inkomishi yekhofi elangeni. Lesi situdiyo sifakwe indlu yokugezela enendlu yangasese, iketela, umshini wekhofi (nespresso), i-microwave nesiqandisi. I-studio nayo ifakwe i-Wi-Fi nethelevishini.
4.76 · 437 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-437
I-"Het heiligstokske" itholakala engadini phakathi nedolobha, itholakala esifundeni esibizwa ngokuthi "de Bergen". Lesi yisifunda esinamakhefi amaningi amancane, izindawo zokudlela nezitolo. Uma ufuna ukuyodla ngaphandle kuningi ongakhetha kukho. Isikhungo "sangempela" sedolobha siyibanga lokuhamba ukusuka phezulu.